လိဒ်ကိုနိင်ပြီးအိုးထရက်ဖို့စ်ကွင်းထဲကသူရဲကောင်းတွေထွက်ခဲ့တဲ့ညကိုပြောခဲ့တဲ့ရိုင်ယန်ဂစ် – FBV SPORT NEWS
လိဒ်ကိုနိင်ပြီးအိုးထရက်ဖို့စ်ကွင်းထဲက သူရဲကောင်းတွေထွက်ခဲ့တဲ့ညကို ပြောခဲ့တဲ့ ရိုင်ယန်ဂစ်
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၁၃) ကို လိဒ်အသင်းနဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံ ကစားရှာမှာ ၆-၂ ဂိုးဖြင့် ဂိုးပြတ်အပြတ်အသတ်အနိုင်ရကာ လက်ရှိရာသီရဲ့ အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ပုံစံကောင်းနဲ့ စုဖွဲ့မှုကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်…
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ၄-၂-၃-၁ ကစားကွက်ဖြင့်ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီး ပွဲစတည်းကနေဘဲ လျင်မြန်တဲ့တိုက်စစ်အဟုန် နဲ့ တိုက်စစ်တွဲလုံးတွေကို တောက်လျောက်ထုတ်ပြီးကစားလာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်…
လိဒ်အသင်းကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲအကြောင်းကို မန်ယူကစားသမားဟောင်း ရိုင်ယန်ဂစ်က အိုးထရက်ဖို့ကွင်းထဲမှာ တချိန် ဂန္တဝင်ကစားသမားတွေဖြစ်လာမယ့်သူတွေကို ခန့်မှန်းပေးခဲ့ပါတယ်..
ရိုင်ယန်ဂစ်က ” အိုလေ အတွက် ဒီပွဲကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်….သူ့ရဲ့ ဖိအားတွေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားမယ်ထင်ပါတယ်….နောက်ပြီးတော့ ကစားသမားတွေကလည်း ဒီပွဲမှာ အကောင်းဆုံးပုံစံမှာ ရှိနေခဲ့ပြီး အမှားနည်းပြီး ထိုက်တန်တဲ့ အောင်ပွဲကို ရခဲ့ကြတာပါ…..
ဒီပွဲမှာ တချိန်ကျ မန်ယူ ဂန္တဝင်ဖြစ်လာနိုင်မယ့် လူငယ်ကစားသမားတွေကို မြင်တွေ့နေရပါတယ်….သူတို့ဟာ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ပုံစံအတွက် ဒီပွဲမှာ ထက်သာလွန်တဲ့ အနေအထားတခုကို ပြသအုံးမှာပါ……
ဘရူနိုဖာနန်ဒက် ဟာ ပွဲတလျောက်လုံး ခြေစွမ်းကျလာခြင်းမရှိပါဘူး တိုးတက်လာတာဘဲ ရှိပါတယ်….သူရဲ့ Passing တွေ ဂိုးဖန်တီးမှုတွေ နဲ့အတူ ဒီပွဲမှာဆို အဆုံးသတ်သေချာတဲ့ စကေးပါ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်…
တော်မီနေး ကွင်းလယ်ကနေ မာမာထန်ထန် ရုန်းအားကောင်း ကောင်း အပေးယူ မိမိ ကစားတတ်ပြီး ဖျက်ထုတ်တာတွေ တိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါကစားနိုင်တာတွေက အစ သူဟာ ကောင်းမွန်တဲ့လူတယောက်ပါ ကွင်းလယ်အဖျက် ကွင်းလယ်တိုက်စစ် နောက်ချန် တိုက်စစ်တွေပါလိုက်ကစားနိုင်မှာပါ….
ဖရက်ဒ် ဒီကစားသမားကတော့ တကယ်ကို မမောမပန်းနိုင် ကစားနိုင်တဲ့လူသားတဦးပါ သူဟာ ဘယ်အချိန်မှာ အသက်ရှုလဲဆိုတာတောင် ကျနော်မသိတော့ပါဘူး…..သူလည်း ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ရော ကွင်းလယ်အဖျက်ရော အကုန်ကစားနိုင်တဲ့လူပါ….လိုအပ်လာရင် ရှေ့လယ်နောက်အကုန်ကစားနိုင်မယ့်ကစားသမားမျိုးပါ….
ဒီကစားသမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လက်ရှိခြေစွမ်းကို ထိမ်းသိမ်းပြီးအသင်းတခုပေါ်ပေးဆပ်မှုတွေထုတ်လာမယ်ဆိုရင် မန်ယူဂန္တဝင်ကစားသမားဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ထိမ်းသိမ်းနိုင်သွားမှာပါ ” ဟု Sport Tribble News မှာရိုင်ယန်ဂစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်..